Weerarkii Sawaariikhda Ee Iiraan Iyo Goobihii Lala Beegsaday#Waa Tan faafaahinta | Xaqiiqonews
Weerarkii Sawaariikhda Ee Iiraan Iyo Goobihii Lala Beegsaday#Waa Tan faafaahinta
Iiraan ayaa bilowday weerar loo adeegsaday sawaariikh oo lagu bartilmaameedsaday xarumo waaweyn oo Israel leedahay ,si loogu jawaaabo weeraro joogto ah lagu beegsanaayo ciidanka Iiraan ee ku sugan dhulka Suuriya.
Sida laga soo xigtey Goobaha weerarada ka socdaan, daraasiin badan oo ka mid ah Ciidanka iiraan ee ku sugan Suuriya ay bartilmaameedsaday afar xarumood oo waaweyn oo militariga Israel leeyahay, halka markhaatiyaasha ay maqleen codadka qaraxyada waaweyn iyo dab ka kacay goobta, iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq culus oo ay sameynayeen gawaarirada gurmadka deg deg ah ee ambalaasta.
Sida Xaqiiqonews ay ka soo xigatay ilo ku dhaw dhaw goobahaasi, bartilmaameedyada militariga Israel ee la duqeeyay waxaa ka mid ah:
Xero Millatari oo weyn oo qaabilsaneed Sahanka
Xarun Sir ah oo ay ka soo kacaan diyaaradaha oo ku dhaw xaduudda siiriya.
Xarun millatari oo qaabilsaneyd wareerinta mowjadaha birlab danabeedka. “Elecromagnetic jumping”
goob ay ku dagaan dayaaradaha Millatariga.
Xarun hogaamin millatari oo taabacsaneyd guutada 810 ee ciidanka yahuudda